Kedu ka esi eji ihe onyonyo echiche ka iburu n'isi nke ọma? - VIDIO
Edere site Tranquillus | August 25, 2021 | Na weebụ
Ị chọrọ ịkwalite asụsụ gị nke ọma ngwa ngwa? Jiri ihe oyiyi uche nwere ike nyere gị aka imezu ebumnuche gị. Kedu ka usoro a si arụ ọrụ? Lisa Joy, otu n'ime ndị nkuzi bekee na MosaLingua na onye na -amụ asụsụ n'onwe ya, na -enye gị ụzọ anọ iji mepụta onyogho dị mma nke nwere ike inyere gị aka melite ebe nchekwa gị na mmụta asụsụ.
Jiri onyonyo echiche iji melite n'asụsụ ebumnuche gị
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 65% nke ndị mmadụ bụ ndị na -amụ ihe anya, nke pụtara na enwere ezigbo ohere ịnọ. N'ezie, ụbụrụ anyị na -arụkarị ọrụ site n'izitere anyị onyonyo.
Nke a bụ ule ngwa ngwa ka ị ghọta nke ọma! Chee echiche maka njem ikpeazụ gị na nnukwu ụlọ ahịa ma nwaa icheta ọtụtụ nkọwa enwere ike. Chee echiche maka ihe ndị dị ka ihe ị zụtara, ọ bụrụ na i were nkata ma ọ bụ ụgbọ ahịa, ọ bụrụ na ịnọ naanị gị ma ọ bụ gị na mmadụ, otu ị siri kwụọ ụgwọ n'ikpeazụ… egbula oge imechi anya gị ma ọ bụrụ na ọ dabara gị.
Kedu otu esi echeta ihe omume a n'isi gị? Ọ bụ n'ụdị okwu, ụda
Kedu ka esi eji ihe onyonyo echiche ka iburu n'isi nke ọma? - VIDIO Ọnwa Iri 15, 2021Tranquillus
GỤỌ Mụta maka sayensị data na ihe ịma aka ya
gara agaUsoro nkwanye ugwu na njedebe nke email n'otu ọnọdụ
-esonụOnye nnata ọ bụla nwere usoro nkwanye ugwu dabara adaba!
Agadi agadi: ọ bụ nkwekọrịta mkpokọta nke na-egosi ma ekwesịrị iji ya na ngụkọta nke opekempe kwekọrịtara
Ụkpụrụ ogo ọrụ ndị ahịa
Kedu otu esi eme rhyme "mmetụta nke ịbụ nke" ya na "ọrụ dịpụrụ adịpụ"?
TPE m nwere oge na dijitalụ